မိုးသီးဇွန်ရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ရောက်ပြီးတဲ့နောက်၊ ဒေါက်တာနိုင်အောင်နဲ့ အင်တာဗျူးပြီး တဲ့နောက်မှာ မြောက်ပိုင်းကိစ္စအတွက် ကျမ ဆက်မေးမှ ရတော့မယ်ဆိုတာ နားလည်ခဲ့ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် မြောက်ပိုင်းကိစ္စတွေကို အနီးစပ်ဆုံးသိနိုင်တဲ့သူတွေကို အဓိကထားပြီး ဆက်သွယ်မေးမြန်း မယ်လို့ စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကိုညိုအုန်းမြင့်နဲ့ တွေ့ခွင့်ရဖို့ အမ တယောက်ရဲ့ အကူအညီနဲ့ ကျမ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
ပါကစ္စတန်တွင် မီးလောင်မှုနှစ်ခုကြောင့် သေဆုံးသူအရေအတွက် မြင့်တက်လာ
ပါကစ္စတန် နိုင်ငံတွင် မီးလောင်မှု (၂)ခုအတွင်း သေဆုံးသူ အရေအတွက်သည် (၈၅)ဦးထိ မြင့်တက်လာကြောင်း သိရသည်။ ပါကစ္စတန်ရှိ ဆေးရုံတာဝန်ခံများက ကရာချိမြို့ရှိ စက်ရုံတစ်ရုံတွင် မီးလောင်ကျွမ်းပြီး သေဆုံးသူ ပမာဏသည် မူလထက် တရိပ်ရိပ် တက်လာခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုသွားသည်။ အဝတ်အထည် စက်ရုံတွင် လောင်ကျွမ်းသော မီးကြောင့် လူပေါင်း(၆၀) သေဆုံးခဲ့ရာ နောက်ထပ် မီးလောင်မှု တစ်ခုနှင့် ပေါင်းပါက (၈၅)ဦးထိ အသေအပျောက် ရှိလာခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် ကရာချိရှိ ပြည်သူ့ဆေးရုံ အရေးပေါ်ခန်းတွင်လည်း မီးလောင်ကျွမ်းသော လူနာများ တက်ရောက်ကုသမှု ခံယူနေရဆဲဟု ဒေါက်တာ တာရစ် ကာမဲလ် အေယူဘီက ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာအစိုးရသည် သတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့် စွမ်းအင်ကဏ္ဍများ၌ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိရေးအတွက် ကမ္ဘာ လုံးဆိုင် ရာအဆင့် သဘောတူညီချက်တစ်ရပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးရန် ရှိနေကြောင်း မြန်မာသမ္မတ ရုံးဝန်ကြီး ဦးစိုးသိမ်းက ယနေ့ နေပြည်တော်၌ ပြောကြားသည်။
"မြန်မာနိုင်ငံရှိ အသက်တစ်နှစ်အောက်ကလေးငယ်များအား ရောဂါငါးမျိုးပေါင်းကာကွယ်ဆေးအသစ် (Pentavalent5in 1 Vaccine) အခမဲ့ ထိုးနှံပေးတော့မည်"
ယနေ့ (၁၂၊ ၉၊ ၂၀၁၂) နံနက် ၉ နာရီက နေပြည်တော်၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် "ပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်သည့်နှစ် (၂၀၁၂) အခမ်းအနား" ကျင်းပသွားကြောင်း သိရှိရပြီး ထောင်စုနှစ်ရည်မှန်းချက် အမှတ်(၄)ဖြစ်သည့် (၅)နှစ်အောက် ကလေးများသေဆုံးနှုန်းကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ၁၉၉၀ ခုနှစ်က ရှိခဲ့သည့် သေဆုံးနှုံး၏ သုံးပုံနှစ်ပုံလျှော့ ချရေးဆိုသည့် ရည်မှန်းချက်ပြည့်မီစေရန်ကြိုးပမ်းသည့်အနေဖြင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဦးစီး၍ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ စတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်းမှ အသက်တစ်နှစ်အောက်ကလေးငယ်များအား Haemophilus Influrenza B (အဆုတ်ယောင်နှင့် ဦးနှောက်အမြှေးယောင်)၊ အသည်းရောင် အသားဝါ(ဘီ)၊ ဆုံဆို့၊ ကြက်ညှာချောင်းဆိုး၊ မေးခိုင်ရောဂါ ဟူသည့် ရောဂါ (၅)မျိုးမှ ကာကွယ်ပေးနိုင် သည့် ရောဂါငါးမျိုးပေါင်းကာကွယ်ဆေး (Pentavalent Vaccine) အား ထိုးနှံပေးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
(၄၊ ၈၊ ၂၀၁၂ ရက်ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာတွင် ယင်းကာကွယ်ဆေးအကြောင်း စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။)
မုံရွာမြိုပေါ်၌ ၁၄၄ ယခုအချိန်ထိ ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေး
မုံရွာမြို့ပေါ်၌ ယနေ့ ညနေ ၆ နာရီခွဲ အချိန်အထိ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးကြောင်း မုံရွာ NLD မှ ကိုနေသီဟကပြောသည်။
မုံရွာတစ်ဖက်ကမ်း၊ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်ရှိ လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်း ၀န်းကျင်ကို ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ထားသည်မှာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကတည်းဟု ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ဦးဇော်မိုးအောင်က ပြောသည်။
ယခုလကုန်ပိုင်းမှစပြီး ၁၃၀,၀၀၀ တန် CDMA 800 MHz ဖုန်းများ ရောင်းချပေးမည်
အိမ်အကူအမျိုးသမီးငယ် သေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အိမ်ရှင်အမျိုးသမီးက ၄င်းကိုယ်တိုင် သတ်ခဲ့ကြောင်း ၀န်ခံ
"သေတာက ၃၆ နာရီအတွင်းသေတယ်။ သေဆုံးသူက ဧရာဝတီတိုင်း ပုသိမ်မြို့ကပါ။ တရားခံကလည်းဝန်ခံတယ်။ ၀န်ခံတော့ ဆက်လက် စစ်ဆေးနေတယ်။ ဆက်ပြီးတော့ အမှုတွဲ တည်ဆောက်နေတယ်"ဟု ရဲမှူးက ပြောကြားသည်။
မန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်အားလေကြောင်းနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ ဆုံရပ်တစ်ခုအဖြစ်အပိုင်း ၆ပိုင်းခွဲ၍ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု သိရသည်။
အမေရိကန်သံအမတ် ခရစ္စတိုဖာ (ဝဲအစွန်) အား လစ်ဗျား အာဏာလွှဲပြောင်းရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ မူစတာဖာ အက်ဘ်ဒဲနှင့်အတူ ဇွန် ၇ ရက်က တွေ့ရစဉ်
သူပုန်များက ဒုံးကျည်ဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အမေရိကန်သံအမတ်နှင့် ဝန်ထမ်း ၃ ဦးသေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း BBC World News ကဆိုသည်။ အမေရိကန်အစိုးရကမူ သံအမတ်သေဆုံးသည့် သတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ယခုအချိန် အတည်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းဆိုခြင်း မရှိသေးသော်လည်း အယ်ဂျာဇီးယား သတင်းဌာနမူ အမေရိကန် သံအမတ် သေဆုံးမှု သတင်းအားအတည်ပြုခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ကမာရွတ်မြိုနယ်တွင်အိမ်ဖော်ဖြစ်သူသေဆုံးမှုတွင် သံသယဖြင့်စစ်ဆေးခံနေရသူ MRTV4သရုပ်ဆောင် မေဇွန်(ခ) မျိုးဇာနည်ဇွန် မှ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး မှယနေ့ သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 15:19 1 comment:
၂၀၁၃ ဆီးဂိမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲအတွက် Wifi Hotspot သုံးရာခန့်တည်ဆောက်သွားမည်
မြန်မာနိုင်ငံ၌ အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမည့် ၂၀၁၃ ဆီးဂိမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် Wifi Hotspot သုံးရာခန့်တည်ဆောက်သွားမည်ဟုသိရသည်။ Wifi Hotspot သုံးရာခန့်ကို နေပြည်တော်ရှိ အားကစား သမားများ နေထိုင်ရာနေရာများနှင့် အားကစားပွဲများကျင်းပရာနေရာများတွင် တည်ဆောက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အောင်ဇော်(ဧရာဝတီ) ၁၀-၉-၂၀၁၂ ရက်နေ. မနက် ၁၀ နာရီကမြောက်ပိုင်းကျောင်းသားများ လူသတ်ပွဲတွင်ကျဆုံးခဲ့သော ကိုထွန်းအောင်ကျော်၏အစ်မဝမ်းကွဲ၊ကျဆုံးရဲဘော် ကိုချိုကြီး၏ ညီမအ ရင်းဖြစ်သူ မသင်းသင်းနဲ. မချောအိဖြူ တို.ဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ်ရုံးချုပ်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဘက်ဆီသို့ ဘင်္ဂလီများ ဦးတည် ခိုးဝင်
မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာမြို့သို့ ဦးတည်၍ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ နယ်စပ်ဒေသရှိ ဘင်္ဂါလီ မွတ်ဆလင်ကုလား များ ခိုးဝင်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
လစ်ဗျားနှင့် အီဂျစ်ရှိ အမေရိကန် သံရုံးများအား ဆန္ဒပြသူများက အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်
အစ္စလာမ်ဘာသာ၏ တမန်တော်ဖြစ်သူ မိုဟာမက်အား နောက်ပြောင်ကျီစယ်ထားသည် အမေရိကန် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအား မကြေ နပ်၍ အီဂျစ်နိုင်ငံနှင့် လစ်ဗျားနိုင်ငံများတွင် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များက အမေရိကန် သံရုံးများရှေ့၌ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ ကြသည်။
ယင်းသို့ ဆန္ဒပြနေရာမှ အစွန်းရောက်များ၏ လှုံ့ဆော်မှုဖြင့် လူထုကြီးမှာ ထိန်းသိမ်းမရဖြစ်ကာ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု အဖြစ် သို့ရောက်ရှိသွားပြီး သံရုံးတွင်းကျော်ဖြတ်ပြီး အမေရိကန်အလံအား မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်း၊ သေနတ်များ ပစ်ဖောက်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ ကြသည်။
မြန်နိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်တဲ့ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်တွေဟာ အခုဆို မန္တလေးမြို့ကို တိုက်ရိုက် လာနိုင်ဘို့အတွက် ပြည်တွင်း လေကြောင်းလိုင်း တခုဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်း MAI က ပြေးဆွဲပေးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ သြဇာကြီးမားတဲ့ Think Tank ဖြစ်တဲ့ CSIS အဖွဲ့ဟာ မကြာသေးခင်က မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ခဲ့ပါတယ်။jမန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိချိန်မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတအပါအ၀င် Stakeholderအားလုံးနီး ပါးနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် တရုတ်နိုင်ငံသို့ စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်မှ စတင်ကာ သုံးရက်တာခရီး သွားရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက အတည်ပြုပြောကြားသည်။
သမ္မတ၏ တရုတ်နိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း နန်နန်းကုန်စည်ပြပွဲသို့ သွားရောက်မည့်အပြင် တရုတ်နိုင်ငံ ၏ ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် အထင်ကရနေရာဖြစ်သော ဇီအန်းပြည်နယ်မှ မြေအောက်စစ်သားရုပ်တုများရှိရာ (Terra Cotta Warriors) သို့လည်း သွားရောက်လည်ပတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် မုန်တိုင်း SANBA
ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်မြောက်ပိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မြို့တော် မနီလာ၏ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၇၄၀ ခန့်သို့ ရောက်ရှိလာပြီး၊ အနောက်ဘက်သို့ ဆက်လက် ရွေ့လျားနေသည့် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း SANBA(17W) သည် လာမည့် ၉၆ နာရီအတွင်း( မြန်မာစံတော်ချိန် စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက် နံနက် ၀၆၃၀ နာရီအချိန်)တွင် အလွန်အားကောင်းသည့် အဆင့်-၄ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီး ဖြစ်လာနိုင်ဘွယ်ရှိကြောင်း TSR မှ ခန့်မှန်း ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အလုံမြို့နယ် အ.ထ. က(၄) အလုံတွင် စက်တင်ဘာလ ၁၀ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်း က တွေ့ရှိခဲ့သည့် အင်္ဂလိပ်၊ ဂျပန်နှင့် မြန်မာ စစ်တပ် တစ်ခုခုမှ မြှုပ်နှံခဲ့သည်ဟု ယူဆရသည့် စစ်ကျန်ဗုံးဟောင်း ၂၅လုံးကို ဖျက်ဆီးသွားမည်ဟု ယင်းဗုံးများ ရှင်းလင်းရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသည့် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးထံမှ သိရပါသည်။
''အဆောက်အဦ ဖောင်ဒေးရှင်းတွေ တူးတဲ့အခါမှာ အခုလိုစစ်ကျန် ဗုံးဟောင်းတွေ တွေ့လေ့တွေ့ထ ရှိတက်ပါတယ်။တစ်လတည်း နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်တွေ့တာမျိုးတောင် ရှိတက်ပါတယ်။ စစ်တပ် တစ်ခုခုက နယ်မြေစွန့်ခွာတဲ့အခါမှာ မသယ်နိုင် လို့ မြှုပ်နှံခဲ့တယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ အခုတွေ့ရှိတဲ့ ဗုံးတွေ က ဆွေးမြေ့နေတဲ့ ဗုံးဟောင်းတွေပါ။ အန္တရာယ်မရှိပါဘူး။ ဒီဗုံးတွေကို ဖျက်ဆီးသွားဖို့အတွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ''ဟု အဆိုပါတာဝန်ရှိသူမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
စီမံကိန်းစပြီး ပြဿနာတွေစဖြစ်ကတည်းက သမ္မတ နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီ တင်ပြသော်လည်း အကြောင်းမထူးဟု ဆို
'ငှက်နှစ်ကောင်' ချိုချဉ်စက်ရုံ အလုပ်သမားများဆန္ဒထုတ်ဖော်
မန္တလေးမြို့၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ ၅၉လမ်း၊ မနော်ဟရီလမ်း နှင့် သိပ္ပံလမ်းကြား ရှိ 'ဌက်နှစ်ကောင်' ချိုချဉ်စက်ရုံ တွင် အလုပ်သမားအခွင့်အရေး ရပိုင်ခွင့်များကို အလုပ်သမားတစ်ဦးမကျန် ရရှိနိုင်ရန်အတွက် ၁၂.၉.၂၀၁၂ မနက် (၅)နာရီ ကတည်းက တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
- အငြင်းပွားနေတဲ့ ကျွန်းစုတွေဆီ တရုတ်ကင်းလှည့်ယာဉ် စေလွှတ် click
- ပင်လုံအတိုင်းသွားမည်ဟု ၆၉ နှစ်မြောက် မွေးနေ့၌ ခွန်ထွန်းဦးပြော click
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်း (ရုပ်သံ) click
- ဘင်္ဂလာရဲရဲ့ Jamaatul Arakan စစ်ဆင်ရေးအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသား ၅၄ ဦး ဖမ်းဆီးခံရ click
Weather Rader များကို လာမယ့် ၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်မှာ ဂျပန် အစိုးရမှ တပ်ဆင် ပေးသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၊မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူရဲ့ ပြောကြားချက် အရ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီ Weather Rader များကို ဂျပန်အစိုးရရဲ့ အကူအညီနဲ့ Jica မှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေး သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Weather Rader ကို ၂ လုံး တပ်ဆင်ပေး သွားမှာဖြစ်ပြီး အဆိုပါ Weather Rader များကို ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူမြို့၊ တောင်ဘက် ၁၃ မိုင် အကွာရှိ မင်းပြင် ကျေးရွာနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ ကမ္ဘာအေး မိုးလေ၀သရုံးမှာ တပ်ဆင် သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် နိုင်ငံတကာ တင်ဒါ ခေါ်ယူရေးအတွက် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အကြံပေး အဖွဲ့ငါးဖွဲ့ကို ပဏာမ ရွေးချယ် ထားကြောင်း မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ကဆိုသည်။
ဘင်္ဂလီ ၃ ဦး ရခိုင်အမျိုးသမီးဆံပင် အား ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ဒရွတ်တိုက်ဆွဲ
စစ်တွေမြို့၊ မင်းဂံရပ်ကွက်နေဒေါ်မဲမချေ (၄၈)နှစ် - အကွက်(၉)၊မဒီဇင်ဘာ(၁၈)နှစ် - အကွက်(၉)၊
မခင်မေကြည်(၁၇)နှစ် - အကွက်(၇) တို့သုံးဦးသည်စစ်တွေတက္ကသိုလ်ဈေးဆိုင်တန်းရှိ ထမင်းဆိုင် တွင်အလုပ်လုပ်ကြသည်ယနေ့ညနေ၅း၄၀ ခန့်အချိန် (စစ်တွေမြို့တွင်(၁၄၄)အမိန့်ကြောင့်စောစော အလုပ်သိမ်းသည် )အလုပ်မှအိမ်ပြန်လာကြရာ မင်းဂံအကွက်(၆)နှင့်(၇)ကြား ဆိုင်ကယ်တစ်စီး Dream 125 Black ပေါ်တွင်ဘင်္ဂလီသုံးဦးစီးနှင်းလိုက်ပါပြီး ရှေ့မှ အစဉ်အတိုင်း လမ်းဘေးမှလမ်းလျောက်ပြန် လာကြသောရခိုင်အမျိုးသမီးသုံးဦးအနက် ခေါ်မဲမချေ အားလှမ်းဆွဲကြသည်တွင် ဒေါ်မဲမချေမှ ရှောင်တိမ်းလိုက်
နိုင်ပါသည်။ သို့သော်နောက်ဆုံးမှ မခင်မေကြည် (၁၇)နှစ်အား ဆံပင်ဆွဲယူသွားခြင်းခံလိုက်ရကြောင်း
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 07:45 1 comment:
မော်လိုက်မြို့ ၏ မြောက်ဘက် (၁၄) မိုင်ခန့်အကွာတွင် အင်အား အသင့်အတင့်ရှိ ငလျင် လှုပ်ခတ်
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၁) ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၇) နာရီ၊ (၃၉) မိနစ်၊ (၄၆) စက္ကန့် အချိန်တွင် မော်လိုက်မြို့ ၏ မြောက်ဘက် (၁၄) မိုင်ခန့် ကွာဝေးသော မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်တွင်းကို ဗဟိုပြု၍ အင်အား ရစ်(ခ်)တာ စကေး (၄.၃) အဆင့်ရှိ အင်အား အသင့်အတင့် ရှိသော မြေငလျင်တစ်ခု လှုပ်ရှားသွားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဘာရတ် အိုဘားမားနှင့် ဇနီး မစ်ချယ်အိုဘားမားတို့ 9/11 ဝမ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ် ခေတ္တငြိမ်သက်ခြင်း အခမ်းအနား ပြုလုပ်
အမေရိကန်သမ္မတ ဘာရတ် အိုဘားမားနှင့် ဇနီး မစ်ချယ်အိုဘားမားတို့သည် 9/11 ဝမ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ် ခေတ္တငြိမ်သက်ခြင်း အခမ်းအနားကို အိမ်ဖြူတော်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။